नेपालदृष्टि । जनताले अत्यधिक रुचाएको नेकपा एमाले बिभाजनले अहिले राजनीतिक तरंग ल्याएको छ । पन्ध्र सालपछि पहिलो पटक अत्याधिक बहुुमतले बनेको एमाले नेतृत्वको संघिय सरकार,प्रदेश सरकार तासको महल ढलिरहेझै भएको छ । लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा देखिएको कांग्रेस एमाले बिभाजनले फेरी सत्तारुढ देखिदा जनमत समेत अचम्मित भएको छ । कांग्रेस सत्तारुढ हुँने कुरा केही बर्ष अगाडि असम्भवझै देखिएको थियो । तर केपी ओली र माधवकुुमार नेपालको विवाद उत्कर्षमा पुुगिरहँदा ज्योतिषको भविश्य वाणी पुुरा भएझै देउवा पुन : प्रधानमन्त्री भएका छन । त्यस पश्चायतको एमाले औपचारिक विभाजनको कम्पन,पराकम्पन प्रदेश हँुदै गाँउसम्म पुगेको छ । चोक चोकमा कित्ता परिवर्तन गर्ने र आफ्नो पक्षमा धेरै देखाउने अघोषित होडवाजीनै चलेको छ । एक्काईस दिने समय सिमाको भरपुर प्रयोग गर्दै आफ्नो राजनीतिक भविश्य कता सुुरक्षित हुुन्छ भन्दै एमाले र एकिकृत समाजबादीमा जान नेता,कार्यकर्ता तपस्वीझै तपश्यारत छन । यी यस्तै सन्दर्भमा हामीले रतुुवामाइ नगरपालिकाका एकिकृत सामजबादीका जिल्ला कमिटिका सदस्य युुवा नेता ठगेन्द्र न्यौपानेसँग विवाद,फुट र आगमी योजनाका बारेमा केही कुराकानी गरेका थियौ,प्रस्तुुत छ त्यसको केही अंश :
एमाले विवाद वास्तवमा के हो ? जुगाँको लडाई कि सत्ताको खेल ? थोरै बताई दिनुुहोस न ?
यो तपाईको प्रश्न हो की अप्सन छान्ने ? यदी प्रश्न भए, यो इमान र बेमान, बैमान, राजनीतिभित्रको लाजनीति विचार र वाहुुुवविचको लडाई हो । यो निरन्तर चलिरहन्छ । केही नेता महाराजा हुुँन खोजेमा यो संगठितरुपको बिद्रोह हो ।
के समाजवादीनै अवको विकल्प हो ?
त्यसलाई विकल्प बनाउँने हाम्रो प्रयास हुुँने छ । हामीले एमालेको विकल्प भन्यौ,जनतासँग गयौ । बहुुमतले जित्यौ पनि । तर विडम्वना आफ्नै अध्यक्षको मन बुुझ्न सकेनौ । र त्यसले गैरमाक्सवादी बाटोमा टुलुटुलुु हेरेर बस्नु पर्ने बाध्यता भयो । त्यसलाई सच्याँउन गरिएको हजारौ प्रयास असफल भए पश्चात हामीले यो विकल्प सोचेका हौ । जनतामा फेरी जानेछौ । पहिला अध्यक्षबाट भएका गल्तीवारे सबैका माफी माग्ने छौ । र स्वच्छ विचारले जनमत निर्माण गर्दै जानेछौ । जुन विचारले शोषित पीडित जनताको पक्षमा काम गर्ने छौ ।
तपाईहरु यसो भनिरहँदा तपाईहरुलाईनै लाल गद्धार भन्दै कित्ता काट्नेहरुको घुुँइचो छ नी ?
जनताको अपेक्षामा काम नगरेको रिस पोखेको हो यो र अर्कालाई दोष दिने परिपाटीनै यहाँको चलन हो । यो घनश्याम भुुषालको भाषामा दलाल पुुजीवादले सुुड छिराएपछि कान्त्रिकारीता त्यसैको शरणमा पर्छ, भनेझै भएको हो । हामीलाई यति हेर्नुु छ, घनश्याम भुुषालको विचारलाई “आई लभ वा”ले कसरी संरक्षण गर्छ । के दिनभरी जुुलुुस लगाए वापत नेताको भट्टीको विल तिर्ने महेश वस्नेतले सायद, अपहरण गरेझै दलाल पुुजिवाद अपहरण गर्न सक्छन ? वा घनश्यामको प्रचारक बन्न सक्छन ? यही कुुरा प्रष्ट छ त.
जनताले के आधारले एकिकृत जनबादीलाई स्वीकर गर्ने ? कांग्रेसको वुई चढ्ने पार्टी नेकपा कसरी हुुन सक्छ ?
जनताले पछिल्लो पटक मत दिइरहँदा खड्किएको प्रश्न,नैतिकता र इमान्दारिकताको हो । त्यही इमान्दारीलाई बेचेर कांग्रेसले खाए,माओबादीले खाए र पछिल्लो पटक एमालेकोे ओली गुठले पनि खाए । अव त्यो हुँुदैन भन्ने पहिलो आधार हरेकले आफ्ना अगाडि उभिएका सवै पार्टीका नेता छान्ने,टोलदेखि केन्द्रसम्म कसले के गरिराखेको छ ? र के गर्ने छ ? तुुलानात्मकरुपमा तिनका अनुुहारमा आर्थिक इमान,भिजन र स्वच्छचारिता हेर्ने । म दावाकासाँथ भन्छुु, एकिकृत समाजवादीका नेता र कार्यकर्ता जनतामा निष्ठाका प्रतिक हँुने छन । अपराधिक राजनीतिक भीडमा एकल बृहस्पती भएर इमानमा रमाएकाहरुको पार्टी हो यो । त्यसैले यो पार्टी जनताको पहिलो रोजाईमा पर्ने छ ।
कांग्रेस राणा शासन,पञ्चायत र गणतन्त्रको सहयात्री दल हो । जव देशमा प्रजातन्त्र विरोधी काम हुुन्छ तव कम्यूनिष्ट,कांग्रेस एक ठाँउमा हुुन्छन । अहिले पनि ओलीपक्षको विरुद्धमा एक भएको हो ।
रतुुवामाइमा तपाईहरुको एकदमै रक्षात्मक अवस्था छ, भन्छन,तपाईहरुको के हो ?
यी सवै ओलीका स्थानिय हनुमन्तेहरुले चलाएका प्रोपोकाण्ड मात्र हुुन । रतुवामाईका एक एक इमान्दार एमाले नेता,कार्यकर्ता र एकिकृत साजवादीमा छन । केहीलाई भ्रम परिरहेको छ । केहीलाई चुुनावको आडमा टिकटको लोभ छ र सूूर्य चिन्ह एमाले ब्राण्डले हौवा पिटिरहेका पक्कै हो । तर यी यस्ता भ्रमका राजनीतिक दोकान चल्ने वाला छैनन् । रतुवामाई मदनको दिक्षित ठाँउ हो । यो ऐतिहासिक भूूमिमा माक्सवादको नाममा ब्राण्ड बेच्ने र स्वास्नीको फरिया जोहो गर्नेहरुले टाउको उठाउँने दुस्साहस नगरेकै जाति । अरु बाँकी समयले नै बताउँने छ ।
प्रदेश-१ मा ‘म अघि बढ्छु’ अभियान सफल होला ?
“ब्लड फर रोल्पा” मोवाइल अप्लीकेशनको सुरुवात
अखिल (क्रान्तिकारी)को अध्यक्ष पञ्चा सिंह बनिन्